मात्र नृत्य | Martech Zone
सोमबार, फेब्रुअरी 1, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
त्यहाँ एक लेडी गा-गा गीत छ कि बाहिर एक साल को लागी अब कल छ नाच मात्र। म यसलाई मेरो टाउकोबाट बाहिर निकाल्न सक्दिन म Ga-ga-ooh-la-la का एक विशाल प्रशंसक होइन ... तर सबै शीर्ष 40० हिटहरू मेरी छोरीले रेडियो बनाउँदछन् र गाउन सुरू गर्दछ। म सहयोग गर्न सक्दिन तर सँगै गाउँछु।
केवल नृत्य सायद एक सानो टिपसी भएको बारेमा मात्र गीत मात्र देखिन्छ तर नृत्यको भुइँमा बाहिर हामफाल्दै र छोडिदिनु हो। नाच मात्र!
यस हप्ता म न्यु अर्लिन्समा एक स्प्रिन्ट भाषण गर्दैछु (मलाई + स्प्रिन्ट = हास्यास्पद) वेबट्रेंडहरू संलग्नता सम्मेलन। मेरो कम्पनी जो ब्लगिंग को बन्द आफ्नो व्यापार को निर्माण गर्न चाहान्छन् को लागी मेरो पहिलो सन्देश अगाडि हुन छ। तिनीहरू आफ्नो सन्देशको गुणवत्ता मा अगाडि हुनु आवश्यक छ। तिनीहरू सामाजिक मिडिया प्रयोग गरेर अगाडि हुन आवश्यक छ। तिनीहरू खोज ईन्जिनमा बाहिर हुनु आवश्यक छ। कसरी? कम्पनीहरूले सबै विघ्नहरू र बेवास्ता गर्न आवश्यक छ नाच मात्र जब यो सोशल मिडियामा आउँछ। रणनीति प्राप्त गर्नुहोस्, भुइँमा बाहिर निस्कनुहोस् र कार्यान्वयन गर्नुहोस्।
तपाईं भित्ते फूल भएर स्पटलाइट प्राप्त गर्नुहुन्न।
मैले इण्डियानापोलिसमा एयरपोर्ट छोड्नु अघि, मैले एक सहकर्मीको ईमेल प्राप्त गरें, मैले केहि हप्ता अघि मात्र भेटें। उनलाई सेतो हाउसले राष्ट्रपतिलाई भेट्न बोलाएको हो किन कि उहाँ कालो समुदायमा गरेका प्रेरणादायक भाषणहरूको कारण। उसको आफ्नै कथा अद्भुत छ र उसको सन्देश तपाईले सोच्न सक्नुहुन्न… उनी भन्छन कि २०१० भनेको मानिसहरुको महानता प्राप्त गर्नका लागि बहानाको अन्त्य हो। अब अरूलाई दोष दिन मिल्दैन, प्रत्येक व्यक्तिले गहिरो खन्नुपर्दछ र तिनीहरूको ईश्वर-प्रदत्त क्षमता अनुसार जिउनुहुन्छ। सबैको लागि यो अविश्वसनीय शक्तिशाली सन्देश हो ... यस देशका अल्पसंख्यक मात्र होईन।
तथ्य यो हो कि हाम्रो आमाबुबा, हाम्रा शिक्षकहरू, हाम्रो सरकारले ... कडा परिश्रम, बकवास किन्न, एक 401०१ के निर्माण गरेर जीवनमा हिँड्न सजिलो हुन्छ। तल उडानमा, म निल्दै छु लिन्चपिन: के तपाई अपरिहार्य हुनुहुन्छ?। अब जब मानिसहरू काममा छैनन्, तिनीहरूको 401०१ के गयो, उनीहरूले आफ्नो बकवास गुमाए ... यो स्पष्ट छ कि यथास्थिति अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा ठूलो झूट मात्र हो।
सेठ गोडिन लेख्छन्,
तपाईको लागि लायकको प्राप्त गर्ने एक मात्र तरिका भनेको छुट्टिनु, भावनात्मक श्रम गर्नु, अपरिहार्यको रूपमा देख्नु, र अन्तर्क्रिया उत्पन्न गर्नु जुन संगठनहरू र व्यक्तिहरूको गहिरो चासो राख्दछन्।
नियमहरूसँग खेल्न छोड्नुहोस् र अन्‍यत्र असंख्य कगहरू (सेठ गोडिनको शब्द) सँग अनुपालन गर्नुहोस् जसले यस देश र त्यहाँको सबै प्रतिभालाई घुँडा टेकाएको छ र हाम्रो अर्थव्यवस्था बन्द छ। आफ्नो आला पत्ता लगाउनुहोस्, nayayers सुन्नुहोस् ... नृत्य फ्लोर मा आफ्नो बट बाहिर निकाल्नुहोस् र यसलाई हल्लाउनुहोस्।
मलाई आशा छ कि यो गीत अब तपाईंको टाउकोमा अडिनेछ।
के हुन्छ यदि तपाईंको मार्केटिंग काम गर्दछ?